Nagu saabsan - Shenzhen Sinsche Technology Co., Ltd.
Shaqaalaheena aqoonta sare leh waxay leeyihiin waayo -aragnimo sanado badan oo ah dhinacyada Sayniska Warshadaha, Kimistariga Falanqaynta iyo Injineernimada. Laga soo bilaabo Xaruntayada Caalamiga ah ee Shenzhen Guangdong, waxaan bixinnaa Iibinta iyo Taageerada Farsamo ee Adduunka oo dhan, Shaybaarka Cilmi -baarista iyo Horumarinta, Xarumaha Tababarka, Warshadaynta iyo Bakhaarrada. Xafiisyada Gobolka iyo Wakiilada Gaarka ah ayaa sidoo kale la aqoonsaday oo loo doortay inay bixiyaan tababar maxalli ah, taageero farsamo iyo iibinta gobolka.
Sinsche, waxaan ku dadaaleynaa heerarka ugu sarreeya ee suurtogalka ah annagoo isku dayey inaan ka gudubno rajada macaamiisheena. OurISO9001: 2015 Shahaadadu waxay xaqiijineysaa inaan u heellan nahay Tayada iyo Badbaadada Alaabtayada, waxay hubisaa in alaabtayada la bixiyo oo dhammaystiran, waqtigeedii la joogo, iyo qiime tartan, iyo ugu dambayntii, waxay hubisaa inaan nalagu garaaci doonin adeegga macmiilka, tababarka badeecadda iyo joogtaynta ka dib taageerada iibka .
Hadafkayaga: Hubinta tayada biyaha dadka adduunka oo dhan.
Laga soo bilaabo xarunteena Shiinaha waxaan maamuleynaa shabakad caalami ah oo Iibka, R&D, Xarumaha Wax -soo -saarka iyo Qeybinta si loo naqshadeeyo, loo horumariyo loona soo saaro qalab tayo sare leh oo kala duwan oo lagu falanqeeyo biyaha.
Waxaan bixinnaa xalka leexashada dhammaan baahiyahaaga falanqaynta iyo kormeerka, iyo annaga oo adeegsaneyna kooxdayada gaarka ah ee takhasuska leh waxaan kula shaqeyn doonnaa si aan u fahanno shuruudahaaga, u siino xalka oo aan ula soconno taageerada heerka koowaad sida iyo goorta aad u baahan tahay.
Baadhitaannadayada iyo baadhitaannada aan ku samaynayno falanqaynta biyaha ayaa horseeday horumarinta Qalabka la qaadi karo, Shaybaadhka iyo qalabka ku-saleysan khadka tooska ah ee tijaabinta saxda ah ee cabbirrada kala duwan ee laga helo biyaha.
Maalgelinta sii socota ee shaqaalahayaga Cilmi -baarista iyo Horumarinta iyo tas -hiilaadyadu waxay xaqiijinayaan inaan ku sii jirno geeska ugu horreeya ee tiknoolajiyadda beerteenna.